Cinga Njenge-Hacker! - I-Semalt Expert ichaza indlela yokukhusela iWebhusayithi yakho
Iindaba malunga nokukhwabanisa kwiwebhusayithi ziphela kwiindaba zonke iintsuku. Izigidi zeedatha ziphelakwizandla zabahlaseli abalahla idatha, beba ulwazi lomthengi kunye nolunye ulwazi oluxabisekileyo olwenza ukuba kubakho ubusela besazisi ngezinye iinkhathi. Yiayikaziwa abaninzi ukuba idibansi lewebhu liqhuba njani ukufikelela okungagunyazisiweyo kwiikhomputha zabo.
uJack Miller, ingcali iSemalt ,uye wenza ulwazi olubalulekileyo malunga nokukhwabanisa ukuba uhlasele ukuhlaselwa.
Kubalulekile ukuqonda ukuba abahlaseli bewebhu bayazi ukwakhiwa kweindawo engaphezulu kwabathuthuli bewebhu. Baqonda kakuhle indlela yokuthunyelwa kweendlela ezimbini ezivumela ukuba abasebenzisi bathumele kwaye bafumane idathaukusuka kumaseva ngokucela.
Ukwakhiwa kweenkqubo kunye newebhsayithi kuthatha iingxelo iimfuno zabasebenzisikufuna ukuthumela nokufumana idatha. Abaculi bewebhu bayazi ukuba abaphuhlisi bewebhu abadala iiwebhusayithi kubadayisi be-intanethi baququzelelaukuhlawula iimveliso emva kokufakwa kwinqwelo yokuthenga. Xa abaphuhlisi bewebhu bakha iiprogram, baxhaswa ngabaxhasi babokwaye ahluleki ukucinga ngeengongelo zokungena kwekhowudi ngabacuki bewebhu.
njani iHackers isebenze?
Abahlaseli bewebhusayithi bayaqonda ukuba iisayithi zisebenza ngeenkqubo ezizicelayoulwazi kunye nokwenza ukuqinisekiswa phambi kwenkqubo ephumelelayo yokuthumela i-data. Idatha yokufakelwa engavumelekanga kwiprogram, ebizwa ngokuba negalelo elibiukuqinisekiswa, lulwazi oluphambili emva kokukhwabanisa. Kuyenzeka xa idatha yenkcazo ingahambelani nokulindela ngokwaleikhowudi eyenziweyo yonjiniyela..Uluntu lwabahlaseli bewebhusayithi lisebenzisa iindlela ezininzi zokubonelela ngegalelo elingavumelekanga kwiiprogram ezibandakanyaiindlela ezilandelayo.
Eyaziwa nangokuthi uhlaselo lwangasese, ukulungiswa kwepakethi kubandakanya ukuhlaselwa kwedathaukuhamba. Umsebenzisi okanye umlawuli wewebhusayithi akaqapheli ukuhlaselwa ngexesha lokutshintshwa kwedatha. Kwindlela yokuthumela umsebenzisiisicelo se data ukusuka kumlawuli, abahlaseli bewebhu bangahlela idatha esuka kumsebenzisi okanye kumncedisi ukufumana amalungelo angagunyazisiweyo. IpaketheUkuhlelwa kwakhona kubizwa ngokuba ngumntu kuMbindi ophakathi.
Ngamanye amaxesha abacuki bewebhu bafumana ukufikelela kwi-PC yomsebenzisi ngokugcina izinto ezinobungoziiikhowudi kwiiseva ezithembekileyo. Ikhowudi enobungozi ichaphazela abasebenzisi xa imiyalo imenywa kwi-PC yomsebenzisi ngokuchofoza kwiikhonkco okanyekhutshelwa kwiifayile. Ezinye izixhobo eziqhelekileyo zokuhlaselwa kwesiza zibandakanya isicelo sendawo yesiphambano kunye nesicatshulwa.
Abahlaseli beewebhusayithi bangenza enye yezinto eziphazamisayo kakhulu ngokuhlasela i-aiseva ukuhlasela iiwebhusayithi. Abahlaseli bafumana ukukhuseleka kwi-server kwaye basebenzise ukugxotha inkqubo kunye nokwenza amalungelo olawulonjengefayile zokulayisha. Baya kwenza ezinjengeengxaki ezinzima zokuba ulwaphulo-mali kunye neendlela zokungabikho kwiwebhusayithi.
Ukukhuselwa kwiWebhs Hackers
Abaphuhlisi beewebhusayithi kufuneka bacinge njengabatshisi. Bafanele bacinge ngeendlelaiikhowudi zabo zitshatyalaliswa kubahlaseli bewebhu ngelixa zakha ii-sites. Abaphuhlisi kufuneka benze iikhowudi ezikhupha ikhowudi yomthombo ngokusindaabalinganiswa abakhethekileyo kunye neikhowudi ezongezelelweyo ukuphepha ukufumana imiyalelo engozi kwii-hackers zewebhu. I-GET nemigangatho yePOST yeeprogramkufuneka kube nokubeka esweni rhoqo.
I-firewalls yesicelo somnxeba inokuqinisekisa ukuba ukhuseleko lwabahlaseli bewebhu.I-firewall igcina ikhowudi yeprogram ngokuyifumana kwi-manipulation njengoko iphika ukufikelela. Isicelo se-firewall esisekelwe efini esabizwayoI-Cloudric i-firewall yesicelo sokugcina ukhuseleko lwewebhu.